Brezila: Ocas, Gazetiboky Manone Vintana Ho An’ireo Tsy Manan-kialofana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2012 12:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Español, Swahili, 日本語, русский, Português
Marina ny anao mikaroka loharanom-baovao hafa ankoatra izay atolotry ny vaovao amin'ny fahitalavitra sy ny gazety natao ho an'ny daholobe. Any Amerika Latina, Eoropa, Azia sy manerana ny tany, dia efa toy izany hatrany amin'ny taonjato faha-21 : ireo vaovao tsara indrindra, ny tena fomba fijery marina, mifototra amin'ny zava-misy tena voamarina, ireo fanamarihana / fanehoan-kevitra mitombina, dia any anaty bilaogy sy ny tambajotra sosialy no hita, any anatin'ireny gazetiboky avoakan'ny eny amin'ny anjerimanontolo na ny mafàna fo ireny.
Ny Revista Ocas (Revue Ocas, amin'ny teny portioge) dia iray amin'ireo famoahana izay afaka ahitàna vaovao samihafa amin'izay omen'ny gazety natao ho an'ny daholobe ao Brezila. Ankoatra izay, ny anaran'ny gazetiboky rahateo dia noforonina avy amin'ny teny fohy famantarana ny : Organisation Civile d'Action Sociale, ilay famoahana dia vokatry ny asa an-tsitrapo niainga avy amin'ny fahitàna ireo gazety eny an-dalambe miroborobo eran'izao tontolo izao, ary indrindra fa ny The Big Issue [amin'ny teny Anglisy] miely ao Londona hatramin'ny taona 1990. Ireo mpanorina ny Ocas dia niezaka ny hanaraka, ao Brezila, io ohatra io mba hamoronana fahafahana mahita asa ho an'ireo olona manana fari-piainana saropady ara-tsosialy. Ary tamin'ny fahitàna ny otrikarena nananan'ireny mpirotsaka an-tsitrapo nanerana ny firenena ireny, no nanohanan'ny International Network Street Papers [amin'ny teny Anglisy] (INSP) ny hetsika ho famoronana gazetiboky izay ireo tsy manan-kialofana no handafo azy. Eny voavakinao tsara mihitsy, ireo tsy manan-kialofana. Ary dia efa miely eny an'arabe ao São Paulo sy de Rio de Janeiro hatramin'ny 2002.
Ocas nº 61, "mandraharaha ao anatin'ny maha-olona" no azo vakiana ery ambanin'ny pejy. Fanaingoana nataon'i Alex Senna nozaraina tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Ny tarika mpamoaka azy dia manazava [amin'ny teny portioge, toy ireo rohy manaraka rehetra ] :
Ny tanjona dia ny hanome fitaovana hamerenana indray ny fanomezany lanja ny tenany ho an'ireo mivarotra, amin'ny famoronana rafitra mba ho izy tenany ihany no tompon'andraikitra amin'ny fiovàna tiany ho hita aminy, ka ho teboka iray fandalovana fotsiny ny Ocas, fa tsy ho tigetra akory.
André Maleronka, izay mandray anjara amin'ny asa fanetsehana ny fanohanana ilay gazetiboky ao amin'ny bilaogy Overmundo, manampy hoe :
Ilay gazetiboky, amin'ny taratasy toy ny gazety, dia mifahatra amin'ireo mpiara-miombona antoka vaventy sy aminà fifangaroam-baovao samihafa, kiana ara-kolontsaina elanelanin'ny tatitra momba ny fandalinana ny politika an-tanan-dehibe, nosoratan'ireo tsy manan-kialofana, na mponina fahiny teny amoron-dàlana.
Lahatsary iray an'ilay fikambanana no manazava ny any ambadiky ny Revista Ocas araka ny fahitàn'ireo mpanao azy sy ireo mpivarotra azy :
Amin'ireo 4 Réaux vidin'ny gazetiboky ireo (1,6o Euros), 3 Réaux (1,20 Euros) mandeha mivantana mankany amin'ny mpivarotra ary ny 1 Réal (0,40 Euros) ambiny dia zarain'ireo mpivarotra kosa amin'ny Ocas, ao anaty rivotry ny fifampitokisana tanteraka, izay maro tamin'izy ireo no tsy mba nahita toy izany tany amin'ny mpampiasa azy taloha. Marisa Suraci, mpivarotra Ocas, hatramin'ny nisian'ilay gazetiboky, dia nahita indray ny fahazotoana miasa :
Mangataka amin'ireo mpampiasa aho : fa inona moa ity fanavakavahana misakana anay tsy ho afaka miasa eto amin'ny firenenay ity ? Ireo olona manjary ifantohan'ny saina manokana ankehitriny, izay, omaly, nifofotra nianatra araka izay tratry ny heriny, niasa faran'izy azon'izy ireo natao? Tsy toy ireo mpampiasa hafa ny Ocas. Ankoatry ny fanohanana ahy ara-bola, dia ry zareo no nahafahako nanatsara ny teo-pahasalamako tamin'ny lafiny rehetra. Mahatsiaro ho metimety aho rehefa miresaka aman'olona, rehefa mivarotra ny gazetiboky, rehefa tsara fandray…
Ny bilaogy Retinas Urbanas (Anakandriamason'ny Tambonivohitra) dia mitondra fanehoan-kevitra amin'ny endriky ny fidirambolan'ny Ocas sy ny tena ilàna ilay tetikasa :
Ny hany tokana loharanombolan'ny Ocas dia ny vidiny aloan'ieo mpivarotra isaky ny gazetiboky iray lafo sy izay mety ho dokambarotra na fanomezana voaray, ary koa, manomana atrikasa fampianarana mamorona iarahana amin'ireo olona avy eny an-dalambe ry zareo, fotoana iray ahafahana mahita talenta iray vaovao isak'izay mandeha eo amin'ny fanaovana sary, lahatsoratra ary hatramin'ny filalaovana sarimihetsika aza. Miaraka amin'ny famoronana fifandraisana, dia azo takarina tsara ireo filàna tena maika ho an'ny tsirairay, ohatra amin'izany ny tsy fanànana karapanondro, na ny filàna fikarakarana manokana hialàna amin'ny fiankinan-doha amin'ny fanafody sy fikarohana vahaolana amin'ny alàlan'ny tambajotran'ireo mpiara-miombona antoka eo amin'ny sehatry ny fikambanana samihafa.
Ny famoahana farany dia tao anaty olana ara-bola goavana no namoahana azy, ary tao São Paulo sy Rio de Janeiro, tanàna roa lehibe ao Brezila izay amoahana tsy miato ilay gazetiboky, dia efa tsinjo sahady ny tsy fisian'ireo mpivarotra. Ny famoahana akaiky indrindra izao – ny faha 80 – dia tsy afaka natonta raha tsy noho ny tetikasa famatsiam-bola nifanotronana tao amin'ny tranonkala Catarse, izay nahafahana nanangona tao anatin'ny 60 andro, fanomezana mitentina 8.880,00 R$ avy amin'olona sy fikambanana miisa 89.
#ocas80: "Sivy taona. famoahana miisa 79. 330.000 isa namidy teny an-dàlana. Olona an-jatony no nahazo tombony tamin'izany"
Manana bilaogy iray ilay gazetiboky sy pejy iray ao amin'ny Facebook, ary mitady mpiasa an-tsitrapo sy mpanjifa izy izao.
Fanangonan-tsonia iray ety anaty aterineto, izay mahatsapa ny maha-zava-dehibe an'ilay gazetiboky sy manantena hiantoka ny fitohizany, no efa mivezivezy any. Amin'ny alalany, mba nahazo fankatoavana kely ny Ocas miohatra amin'ireo fikambanana hafa, raha tsy hilaza ny hafalian'ireo mpivarotra rehefa mba manomboka hitan'izy ireo fa mitombo ny isan'ireo olona mahafantatra azy eny an-dàlana. Ny pejy voalohany dia mampiseho ireo breziliana fanta-daza sy manerana ny tany, ary miresaka lohahevitra samihafa miaraka amin'ny fandraisana andraikitr'ireo mino ny fisian'ny fiarahamonina iray afaka ahazoana vaovao avy amin'ny olom-pirenena rehetra.